Maitiro Ekugadzira Iyo Animated GIF YeYako Inotevera Imeyili Yekushambadzira Campaign Uchishandisa Photoshop | Martech Zone
Isu tine nguva inoshamisa yekushanda neakakosha mutengi Closet52, an online dress store izvo zvatakamaka uye kuvaka kubva pasi zvichikwira kune yakasimbiswa uye inozivikanwa fashoni kambani muNew York. Hutungamiri hwavo hunogara huchishanda nesu pamazano ekubatana kwemushandirapamwe unotevera kana zano ratiri kuita. Sechikamu chekushandiswa kwavo, takaisa Klaviyo nokuti Shopify Uyezve. Klaviyo inzvimbo inozivikanwa yekushambadzira otomatiki papuratifomu ine yakasimba kwazvo yekubatanidza kuShopify pamwe nevakawanda Shopify Mapurogiramu.
Chinhu chandinofarira ndechavo A / B yokuedzwa muKlaviyo. Iwe unogona kugadzira akasiyana vhezheni eemail, uye Klaviyo anotumira sampling kunze, mirira mhinduro, uye wozotumira vasara vanyoreri iyo yekuhwina vhezheni - zvese otomatiki.
Mutengi wedu anonyoresa maemail emafashoni muindastiri uye akaenderera mberi nekutaura kuti aifarira sei mamwe maemail ane slideshow yemifananidzo yechigadzirwa. Vakabvunza kana taigona kuita izvozvo uye ndakabvuma ndokuvaka mushandirapamwe neA/B bvunzo apo takatumira imwe vhezheni ine animation yezvigadzirwa zvina, uye imwe ine imwechete, yakanaka, static mufananidzo. Mushandirapamwe uyu ndewekuputika kutengeswa kwemadhirezi avo ekudonha sezvo vari kuunza mitsetse yezvigadzirwa zvitsva.
Shanduro A: Animated GIF
Shanduro B: Static Image
Mufananidzo wechikwereti unoenda kune vane tarenda vanhu Zeelum.
Sampling yemushandirapamwe ichiri kushanda izvozvi, asi zviri pachena kuti iyo email ine animated graphic irikupfuura kupfuura iyo static mufananidzo… 7% chiyero chakavhurika... asi zvinoshamisa 3 times the click-through rate (CTR)! Ini ndinofunga chokwadi chekuti iyo animated GIF yakaisa akati wandei akasiyana masitaera pamberi peanonyoresa yakatungamira kune vakawanda vashanyi.
Maitiro Ekugadzira Iyo Animated GIF Uchishandisa Photoshop
Ini handisi chero rudzi rwepro ane Photoshop. Muchokwadi, nguva chete dzandinowanzo shandisa Adobe Creative Cloud's Photoshop ndeyekubvisa kumashure uye kuisa mifananidzo, sekuisa skrini pamusoro pelaptop kana nharembozha. Nekudaro, ini ndakachera pamhepo ndikafunga nzira yekugadzira animation. Iyo mushandisi interface yeiyi haisiyo iri nyore, asi mukati memaminitsi makumi maviri uye mushure mekuverenga mamwe matutorials, ndakakwanisa kuigogodza.
Kugadzira yedu source mifananidzo:
miganhu -Animated GIFs anogona kunge akakurisa, saka ndakaita shuwa yekuseta yangu photoshop faira zvimiro kusvika kunyatsoenderana neyedu 600px yakakura email template upamhi.
Kudzvinyirira -Mapikicha edu ekutanga aive akakwira resolution uye yakakwira faira saizi, saka ndakaiisa saizi uye nekuidzvanya nayo Kraken kumaJPG ane saizi diki yefaira.
Shanduko - Nepo iwe unogona kuedzwa kuwedzera animation gumi nemaviri (semu. Kupera kushanduka) pakati pemafuremu, izvo zvinowedzera saizi yakawanda kufaira rako saka ndinodzivirira kuita izvozvo.
Kugadzira iyo animation mu Photoshop:
Gadzira faira itsva nehukuru hunoenderana nehukuru chaihwo hwauri kuisa mune yako email template.
sarudza Hwindo> Nguva kugonesa iyo yenguva yekuona pazasi kwe Photoshop.
Wedzera imwe neimwe mufananidzo sechikamu chitsva mukati Photoshop.
Click Gadzira Frame Animation muNharaunda Yenguva.
Kurudyi-kurutivi rwedunhu reNguva, sarudza iyo hamburger menyu uye sarudza Gadzira Mafuremu kubva kuMatanho.
Mukati meiyo Timeline dunhu, unogona dhonza mafuremu muhurongwa kuti iwe unoda kuti mifananidzo ibude mairi.
Dzvanya pafuremu yega yega painoti 0 sec, uye sarudza nguva yaungade iyo furemu kuti iratidze. Ndakasarudza 2.0 seconds per furemu.
Mukudonhedza pasi pemafuremu, sarudza Zvachose kuve nechokwadi kuti animation loop nguva dzose.
Baya Tamba Bhatani kuti utarise animation yako.
Click Faira> Export> Chengetedza Webhu (Nhaka).
sarudza GIF kubva pane zvingasarudzwa kumusoro kuruboshwe kweExport screen.
Kana mifananidzo yako isiri pachena, bvisa iyo Transparency kuita.
Click Save uye kutumira faira yako.
Ndizvo! Iwe zvino une animated GIF yekuisa kune yako email chikuva.
kuburitsa: Closet52 mutengi wekambani yangu, Highbridge. Ndiri kushandisa affiliate links muchinyorwa ichi che Adobe, Klaviyo, Kraken, uye Shopify.
Tags: ab testkupiswaadobe rekugadzira goreadobe photoshopanimated giftinya-kuburikidza-mwerocreative cloudctrecommerceecommerce emailemail hupenyu animated gifemail mushandirapamweEmail Marketingemail kuedzahighbridgesei kutimaitiro ekugadzira animated gifcompression yemufananidzoKlaviyokrakenmarketing campaignchiyero chakavhurikaPhotoshopphotoshop gifPhotoshop dzidzisoshopify
Maitiro ekuseta Email Kusimbisa neMicrosoft Office (SPF, DKIM, DMARC)